Fikarohana momba ny firaisana Fitoviana ara-batana amin'ny toe-java-miteraka amin'ny zaza teraka amin'ny fanambadiana-fampidirana - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ny haavon'ny endrika, ny endrika sy ny tarehimarika amin'ny tarehy, dia afaka mifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafatiny. Ho an'ny lehilahy, ny volom-borona, toy ny bera sy ny fikorian-davenona, dia azo zakaina avy amin'ny fampidirana iray hafa. Ny fahazarana ara-batana, toy ny fihetsika sy ny fihetsika tanana, dia mety tsy hifanaraka amin'ny fiainana mandra-pahafaty. Na dia misy sary mihetsika aza ny sary sy sary dia matetika no tsy mitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa.
Kitendry roa Ian Stevenson Ireo tranga misy ny fampitahana sary, izay mampiseho fa ny endriky ny endriky ny endriky ny endriny dia mety mitovitovy amin'ny fiainana iray manontolo Suzanne Ghanem ary Daniel Jurdi.
Ahoana no ahafahan'ny endrika ivelany mitovitovy amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa? Tsy fantatra ny valin'io fanontaniana io, saingy angamba ny fanahy dia manomana tetikasa angovo na hologram ho ao amin'ny foibem-pambolena enti-mamelona, ​​izay mamolavola ny tavy.
Ny fitsipika dia mitovy amin'ny fomba iantsoana mpitsabo arifomba mampiasa ny herinaratra elektrika mba hanamboarana taolana amin'ny ratra mafy. Io rafitra angovo io dia tsy manampy fotsiny amin'ny famoronana endrika ivelany, fa azo ampiasaina koa mba hampidirana ny vaovao sy ny talenta ao amin'ny vatana sy saina enti-mamorona, izay afaka
manazava ny zaza amam-behivavy.
Mazava ho azy fa misy ny génétique ary izy io dia ny fifandraisan'ny môdelin'ny angovo fanahy miaraka amin'ny lova génétique iray izay miteraka fisehoana. Ny olona iray tonga amin'ny firazanana hafa dia hanana endrika ara-batana izay mifanaraka amin'izany hazakazaka izany, na dia ny ampahany amin'ny tarehy aza, ny firafitry ny taolana, dia mbola haharitra hatrany amin'ny fahatongavan'ny nofo iray hafa. Ny fitoviana amin'ny fianakaviana dia mitranga koa noho ny génétika. Ny môdely angovo an'ny fanahy dia mifandray amin'ny antony ara-pirazanana sy ara-pirazanana mba hamaritana ny bika aman'endriny. Araka izany, ny fitoviana ara-batana mandritra ny androm-piainana dia mety miovaova arakaraka ireo fitaomana ireo.
Ny mariky ny fitoviana ara-batana amin'ny toe-java-niseho ao amin'ny vatana dia endrika iray hita taratra amin'ny hafa.
Resin-kaja eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ara-batana